Izikhulu ze-ANC ziyamesaba uJordaan - Umbiko | News24
Izikhulu ze-ANC ziyamesaba uJordaan - Umbiko
Port Elizabeth – Isethembiso sikaDanny Jordaan sokugxila ezinsolweni zezenzo zenkohlakalo kuMasipala waseNelson Mandela Bay kubikwa ukuthi sesishiye ezinye zezikhulu eziphezulu kulo masipala zikhathazekile, kusho umthombo kwabeNetwerk24.
Iqembu le-ANC lamemezela ukuthi uJordaan usekhethwe ukuba athathe isikhundla semeya kumasipala, engena esikhudleni sikaBenson Fihla, 83.
Enkulumeni abenayo nabakwaSABC ngeledlule, uJordaan wathembisa ngokubhekisisa imibiko eyakhishwa ngalo masipala.
Funda nalolu daba: Amatekisi abuyela emgwaqeni eThekwini
Kule mibiko kubalwa kuwona okaKabuso kanjalo nokaPikoli obeka izinsolo zokuxhashazwa kwezimali kanye nokungaphathi ngendlela efanele.
Nakuba le mibiko yakhishwa ngonyaka ofile, azikho izinyathelo ezathathelwa izikhulu ezithintekayo.
Umthombo utshele iNetwerk24 ukuthi yileso sizathu amanye amakhansela e-ANC engeke ameseke uJordaan.